MNP – GOVERNEMANTA ALEMANA : Homena lanja ireo olona miaina sy misehatra amin’ny jono
Satria Nosy i Madagasikara dia anisany sehatra iray mampidi-bola be indrindra eto an-toerana ny harena anaty ranomasina sy jono noho ny fananan’ny Malagasy ireo karazana hazan-drano maro isankarazany. 7 décembre 2017
Ny tranga hita sy tsapa anefa matetika dia ireo olona misehatra voalohany amin’ity tontolo ity indray no tsy misitraka ireo tombontsoa azo avy amin’izany. Indraindray aza toa iharan’ny fanararaotana mihitsy. Ny tombony tokony ho azon’izy ireo anefa dia mety hahafahana mivelatra eo amin’ny sehatra maro, toy ny famoronana asa, ny fandraharahana sy mampivelatra ny tontolon’ny varotra.
Noho izay antony izay indrindra no hanatanterahana ny tetikasa « Pêche côtière durable » hahafahana manome lanja ny harena voajanahary ao an-dranomasina fa ihany koa, hanomezana lanja ireo olona miaina amin’ity sehatra ity. Tsara ny mampahafantatra fa miara-miasa amin’ny fanatanterahana izao tetikasa izao ny Madagascar National Parc (Mnp), miaraka amin’ny governemanta Alemana.
Ity farany izay nanolotra vola 10 tapitrisa euros mba ho fandavorariana ny praograman’asa. Etsy ankilany dia manohana azy ireo ihany koa ny ministeran’ny tontolo iainana. Efa nisy ny lamin’asa napetraka ho amin’ny fanatontosana izany manerana ireo valan-javaboahary sahanin’ny Mnp rehetra manerana ny Nosy. Ho mariky ny fifanekem-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta noho izany dia tontosa ny alatsinainy lasa teo ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Mnp sy ny governemanta Alemana.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1910) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021